Thu, Jul 2, 2020 at 8:41pm
एजेन्सी, २५ माघ दिल्लीको विधानसभाको निर्वाचन पछि विभिन्न एक्जिटपोलको आकडा अनुसार आम आदमी पार्टी पुनः सत्तामा पुग्ने देखिएको छ । ७० सदस्यीय दिल्लीको विधानसभामा बहुमतका लागि ३६ विधायकको आवश्यकता पर्दछ । विभिन्न समाचार संस्थाले लिएको एक्जिटपोलको आकडा अनुसार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको नेतृत्व भएकोे आम आदमी पार्टीको निर्णायक बहुमत देखिएको छ । एबीपी न्यूज तथा सी भोटरको एक्जिट पोलका अनुसार आम आदमी पार्टीले ४९ देखि..
काठमाडौं, २४ माघ चिनमा महामारीको रुप लिएको नोबेल कोरोना भाइरसबाट बिहीवार थप ७३ मानिसको मृत्यु भएको छ । यसबाट मृतकको संख्या बढेर ६ सय ३६ पुगेको छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या ३१ हजार पुगिसकेको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले शुक्रवार वुहान प्रान्तमा ६९ जना र अन्य प्रान्तमा ४ जना मारिएको पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य आयोगले एक दिनमा थप ३..
वासिंगटन, २१ पुस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महाअभियोगमा सफाइ पाएका छन् । उनकै रिपब्लिनक पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटले उनलाई सफाइ दिएको हो । सिनेटमा भएको मतदानको परिणाम उनको पक्षमा आएपछि राष्ट्रपति पदबाट हट्नु नपर्ने भएको छ । ट्रम्पमाथि शक्तिको दुरूपयोग गरेको र कंग्रेसका कामकारबाहीमा बाधा पु¥याएको आरोप लागेको थियो । शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमाथि भएको मतदानमा ट्रम्पको पक्षमा ५२ र विपक्षमा ४८ मत..
वासिङ्टन, २२ माघ अमेरिकी इतिहासमा संसदको सभामुखले कुनै राष्ट्रपतिले संसदमा गरेको वार्षिक सम्बोधन भाषण संसदकै रोष्ट्रममा च्यातिदियो भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । तर यस पटक अमेरिकी कङ्ग्रेसकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले सबैलाई आश्चर्य पार्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको भाषणको प्रति रोष्ट्रममै च्यातिदिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कङ्ग्रेसमा “स्टेट अफ दी यूनियन” नामको वार्षिक सम्बोधन भाषण समाप्त गरेलगत्तै सभामुख पेलोसीले ट्रम्पको भाषणको प्रतिलाई दुई टुक्रा..
केन्या, २१ माघ । मंगलबार केन्याका पूर्वराष्ट्रपति ड्यानियल आराप मोईको निधन भएको छ । उनको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको केन्याको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।मोईको निधनमा राष्ट्रपति कार्यालयले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । केन्याको राजनीतिमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनको निधनमा केन्या स्तब्ध भएको जनाएको छ । केन्याका गृहमन्त्रीसमेत रहेका मोईको जन्म सन् १९२४ सेप्टेम्बर..
काठमाडौँ, २० माघ चिनियाँ सरकारले कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई लिएर "त्रास फैलाउने गरी" प्रतिक्रिया जनाएको अमेरिकामाथि आरोप लगाएको छ। अमेरिकाले जनस्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गरेकोमा र दुई सातायता चीन बसेका विदेशी नागरिकको आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। चीनमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस देखा परेको पुष्टि भइसकेको छ। चीनमा मात्रै करिब ३६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ। चीन बाहिर १५० जनाभन्दा बढीमा भाइरस..
एजेन्सी, १९ माघ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गान्धी दिल्लीको गंगाराम अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएको भारतीय सञ्‍चारमाध्‍यमहरुले जनाएका छन्। सोनिया शनिबारको बजेट कार्यक्रममा पनि उपस्थित भइनन् । सोनिया गान्धीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण उनी आजभोलि राजनीतिमा कम सक्रिय देखिएकी हुन् ।..
काठमाडौँ, १९ माघ कोरोनाभाइरसबाट फिलिपिन्समा पनि एक जनाको मृत्यु भएको छ । कोरानाको संक्रमणबाट मृत्यु भएका ती ४४ वर्षीयको थप पहिचान खुलाइएको छैन । फिलिपिन्सको स्वास्थ्य विभागकाअनुसार, २५ जनवरीमा अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु भएको हो । चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण २२ देशमा फैलिसकेको छ । चीनमा मात्रै मृतकको संख्या ३०४ पुगेको छ । कोरोनाबाट १२ हजार बढी संक्रमित देखिएको छ..
अमेरिका, १८ माघ महाअभियोग सुनुवाइका क्रममा साक्षी र थप प्रमाण झिकाउने मागको विपक्षमा सिनेटरहरूले मतदान गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सफाइ पाउने बाटो खुला भएको छ। डेमोक्र्याट सांसदहरूले चार रिपब्लिकन सांसद महाअभियोगको पक्षमा उभिने आशा गरेका थिए। त्यसबाट सुनुवाइ लम्बिन सक्थ्यो। तर चारमध्ये केवल दुई रिपब्लिकनहरूले मात्र डेमोक्र्याटहरूसँग मतदान गरे। अब राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सफाइ दिने विषयमा मतदान हुनेछ। त्यसमा उनले जित्ने निश्चित..
ब्रसेल्स, १७ माघ यूरोपेली संघ (इयू)बाट बेलायतको बहिर्गमनपछिको नयाँ बिहानीबारे छलफल गर्न शुक्रबार ब्रसेल्समा भेला भएका उच्च अधिकारीले ब्रेक्जिटपछि बेलायतले इयूसँग निकट रहँदाको लाभ गुमाउने बताएका छन् । “हामी संयुक्त अधिराज्यसँग सकेसम्म राम्रो सम्बन्ध कायम होस भन्ने चाहन्छौँ तर समूहको सदस्य रहँदाजस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन,” यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले भन्नुभएको छ । उहाँले इयू परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिसेल र यूरोपेली..
नयाँदिल्ली. १६ माघ कोरोना भाइरसका बिरामी भारतमा पनि देखिएका छन् । भारतको केरलामा बिहीबार पहिलो बिरमी पुष्टि भएको भारतीय च्यानल एएनआईले जनाएको छ । एएनआईले ट्वीटरमार्फत यसबारे जानकारी गराएको छ । कोरोना भाइरस लागेका बिरामी चीनको वुहानबाट फर्किएको बताइएको छ । भारतमा अहिले ती बिरामीलाई उच्च सतर्कता साथ स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी राखिएको छ ।..
हवाना, १५ माघ जमैका र पूर्वी क्युबाबीचको क्यारेबियन समुद्री क्षेत्रमा मङ्गलबार ७.७ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ, तर उक्त भूकम्पबाट कुनै मानवीय र भौतिक क्षति भएको छैन । भूकम्पको धक्का मेक्सिकोदेखि अमेरिकाको फ्लोरिडासम्मको विशाल क्षेत्रमा अनुभव गरिएको थियो । भूकम्पको केन्द्रविन्दु जमैकाको १३९ किमी टाढा उत्तरपश्चिम मोन्टेगो बे क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले जनाएको छ । भूकम्प स्थानीय समय अनुसार अपराह्न २ः१०..
वासिङ्टन, १४ माघ कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई चीन भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट चीनमा मात्रै एक सय ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । साथै ४ हजार भन्दा धेरै संक्रमित भएको बताइएको छ । चिनियाँ नयाँ वर्षको उमंग छाइरहँदा कोरोना भाइरसले चीनमा गम्भीर अवस्था निम्त्याएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनलाई आवस्यक परेको वस्तु उपलब्ध गराउने पति पतिवद्धता..
रामाल्लाह, १३ माघ प्यालेस्टायनका प्रधानमन्त्री मोहम्मद श्तायहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘शान्ति योजना’ अस्वीकार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । ट्रम्पको योजना इजरायलको पक्षमा आएको भन्दै उहाँले योजना बहिस्कार गर्न सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको हो । “यो योजना मार्फत् ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई संरक्षण गर्ने देखिएको छ, यो मध्यपूर्वको शान्ति योजना होइन,” प्यालेस्टायनी प्रधानमन्त्री श्तायहले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भन्नुभयो । उहाँले यस योजनाले..
नयाँ दिल्ली, ११ माघ भारत र ब्राजिलले साइबर सुरक्षा, जीवविज्ञान तथा स्वास्थ्य र औषधिलगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १५ बुँदे सम्झौतापत्रमा शनिबार हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर मेसियस बोल्सोनारोबीच भएको द्विपक्षीय वार्तापछि ती दुई मुलुकले साइबरसुरक्षा, जीवविज्ञान र स्वास्थ्य र औषधिलगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । दुई मुलुकबीच जैविक ऊर्जा तथा लगानी, सुविधासम्बन्धी सहयोग,..
काठमाडौं, १० माघ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्भवती महिलालाई अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गर्न थालेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने गर्भवती महिलालाई अप्ठेरो हुने गरी ट्रम्प प्रशासनले नयाँ भिसा नियम सार्वजनिक गरेको हो । बच्चा जन्माउनका लागि मात्रै अमेरिका आउन लागेको भन्ने कन्सुलर अधिकृतहरुलाई लाग्यो भने आवेदकका पर्यटक भिसा अस्वीकृत गरिने संघीय रजिस्टरले जारी गरेको नयाँ नियममा भनिएको..
बेइजिङ, माघ ९ पछिल्लो केही समयदेखि विश्वको चिन्ताको बिषय बनेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थप फैलिनबाट रोक्नका लागि बेइजिङले चिनियाँ नयाँ वर्षका अवसरमा गरिने सबै ठूला कार्यक्रम रद्द गर्ने भएको छ । सरकारले सुरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने चिसो, फ्लु वा निमोनियासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएको नयाँ कोरोना भाइरस (२०१९–कोभ) को सङ्क्रमण हरेक दिन फैलिएका सूचनापछि श्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुरोधमा सरकारले नयाँ वर्ष मनाउँदा ठूलो जमघटलाई..
सिड्नी, ९ माघ अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट दक्षिणपश्चिमी भागमा आगो निभाउने कार्यमा खटिएको एउटा ट्याँकर बिमान बिहीबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार बिमानमा सवार चालक दलका तीन जना अमेरिकीको मृत्यु भएको छ । न्यू साउथ वेल्सको ग्रामीण अग्निनियन्त्रण सेवाका आयुक्त शेन फिट्सिमन्सले क्यानाडाली कम्पनीको सी–१३० हर्कुलस विमानसँग स्थानीय समयअनुसार बिहीबार अपराह्न १.३० बजे सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद भएको बताउनुभयो । उक्त जहाज स्लोई मोनारो..
डाभोस, ९ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केहि थप मुलुकका नागरीकलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिवन्ध लगाउने भएका छन् । सो सूचीमा युरोप, अफ्रिका र एशियाका मुलुक पनि विस्तार हुन लागिरहेको अमेरिकी मिडियाले जनाएका छन् । उनको कार्यकालमै यसअघि ७ मुश्लिम बहुल राष्ट्रका नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रमका क्रममा बोल्दै ट्रम्पले यस सूचीमा अरु केही देश पनि थपिन..
काठमाडौँ, ८ माघ अस्ट्रलियाको राजधानी केनबराको एअरपोर्टको नजिकै रहेको जंगलमा आगो सल्किएपछि शहरका केही स्थान खाली गराइएको छ । शहर नजिकै लागेको आगोका कारण आवागमन रोकिएको छ । अधिकारीहरूले आगलागी भएका नजिकका क्षेत्रलाई खाली गर्न र प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढै रहन भनेका छन् । अस्ट्रेलियामा केही दिन अघि परेको पानी र तापमानमा आउको गिरावटका कारण आगलागी नियन्त्रणमा केही सफलता मिलेको थियो । तर, तीव्र..
बेइजिङ, माघ ८ कोरोना भाइरसको महामारी ‘गम्भीर चरण’मा प्रवेश गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले यस भाइरसको रोकथाम गर्न अब गाह्रो हुने स्वीकारर्दै यसको महामारी गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको बताएका हुन् । हालसम्म यस भाइरसबाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सयभन्दा बढी यसबाट चीनमा संक्रमित छन् । मंगलबार मात्र चीनले यस भाइरस मानवबाट पनि सर्ने पुष्टि गरेको थियो। मंगलबार स्वास प्रस्वासबाट यस..
बेइजिङ, ७ माघ घुस लिएको आरोप लागेका इन्टरपोलका पूर्व प्रमुख मङ खोङवेलाई चीनको एक अदालतले १३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल (इन्टरपोल) को प्रमुख रहेकै समय फ्रान्सबाट चीन गएका समय उहाँ परिवारको सम्पर्कमा नपुगेको भन्दै पारिवारिक स्रोतबाट दावी गरिएपछि उहाँको अवस्थाबारे सर्बत्र चासो व्यक्त गरिएको थियो । तर पछि चीन सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रपति सी..
बेइजिङ, ७ माघ पूर्व इन्टरपोल प्रमुख मेङ होङवेइलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा चीनको एक अदालतले साढे १३ वर्षको जेल सजाय सुनाएकाे छ । मेङ २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका मेङ गत अक्टोबरमा फ्रान्सबाट चीन पुगेपछि गायब भएका थिए । मेङबारे बेखवर बनेको इन्टरपोलले चीनसँग उनीको जानकारी मागेको थियो । फ्रान्समा दुई बालबच्चाको साथमा..
सिओल, ६ माघ चीनको वुहान सहरबाट देखा परेको रहस्यमयी ‘कोरोनाभाइरस’ को सङ्क्रमण दक्षिण कोरियामा पनि पहिलो पटक भेटिएको छ । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार चीनको इन्चियन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनिबार कोरिया पुगेकी एक चिनियाँ महिलालाई ज्वरो आएको र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएपछि परीक्षण गर्दा उनलाई ‘कोरोनाभाइरस’ पुष्टि भएको हो । अस्पतालमा अन्य विरामीभन्दा टाढा राखेर उनको उपचार भइरहेको रूसी समाचार संस्था..
एजेन्सी, ४ माघ जनवरी ३ बिहान सबैरै बग्दादको विमानस्थल बाहिर एक ड्रोन आक्रमण भयो । मिडियाले सुरुमा उक्त आक्रमणलाई त्यति ठूलो घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको थिएन । तर मर्नेमध्येमा एक जना इरानका शीर्ष कमाण्डर पनि छन् भन्ने सार्वजनिक भयो तब मध्य–पूर्वको राजनीतिक एकाएक गर्मायो । यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै अमेरिकी कारबाहीमा इरानको विशेष फौज कुद्स फौजका प्रमुख कासिम सुलेमानी मारिएको..
नयाँ दिल्ली, ४ माघ । भारतमा जम्मु-कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० निष्प्रभावी बनाइएको अब पाँच महिनाभन्दा बढी भएको छ । त्यसैले अहिले भारतीय सरकारले दाबी गरिरहेको छ, जम्मु कश्मिरमा अहिले सब कुरा ठिक भइसकेको छ । अहिले त्यहाँको अवस्था सामान्य भएको सरकारले दाबी गरिरहेको छ । तर, विपक्षीले आफूहरुलाई त्यहाँ जानबाट रोकिएकाले त्यहाँको अवस्था ठिक नभएको बताइरहेका छन् । विपक्षीले..
एजेन्सी, ४ माघ । अमेरिकी राजदूत ह्यारी ह्यारीसको जुँगाको विषयलाई लिएर दक्षिण कोरियामा चर्को विरोध भएको छ । उनले पालेको जुँगाको विषयलाई लिएर कोरियाली जनताले विरोध गरिरहेका हुन् । ह्यारीस सन् २०१८ यता कोरियाका लागि राजदूत छन् । एक र्यालीमा कोरियाली नागरिकले ‘ह्यारीसलाई दक्षिण कोरियाको राजदूतबाट हटाउनु पर्छ’ भन्ने नारा लगाएका थिए । सोही प्रवृत्तिको पर्चा पनि बोकिएको थियो । ह्यारीसको जुँगाको..
तेहरान, ३ माघ इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले आफ्नो सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सैन्य मुठभेड वा युद्ध नचाहेको भन्दै यसका लागि आफूले सम्भावित युद्ध टार्न कूटनीतिक पहलहरू जारी राखेको बताउनु भएको छ । रौहानीले शुक्रबार भन्नुभयो, “तेहरान र वाशिङ्टन जनवरीको शुरुमा एक बर्षभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तको नजिक पुगेपनि द्वन्द्व कसैका लागि राम्रो होइन भन्ने पक्षमा इरान छ । अमेरिकासँगको..
एजेन्सी, २ माघ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदन, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकाे सिनेटमा पठाएको छ । हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले महाअभियोगको प्रस्ताव माथिल्लो सदनमा पठाउने प्रस्ताव मंगलबार पारित गरेको छ । यसअघि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा २२८ जनाले माथिल्लो सदनमा पठाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १९३ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । हाउस..
काठमाडौं, २ माघ बेल्जियमकी अधिराजकुमारी अस्ट्रिडले नेपालको भ्रमण गर्ने भएकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनी एक साता लामो भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउन लागेकी हुन् । माघ ५ देखि ११ गतेसम्म उनी नेपाल भ्रमणमा हुनेछिन् । राजकुमारी बेल्जियमको सहयोगमा सञ्चालित दामियन फाउन्डेसनको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी हुन्। ५८ वर्षिया एस्ट्रिड राजा फिलिपकी कान्छी बहिनी हुन् । एस्ट्रिडले नेपाल रहँदा राष्ट्रपति विद्या..
Results 1601: You are at page7of 54